Inona no hitantsika any Roma ao anatin'ny 3 andro | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | tanàna, General, Roma
Tsidiho ny tanànan'i Romana ao anatin'ny telo andro dia tena zara raha misy, ary tsy maintsy mandeha adiny iray arivo avy amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana iray hafa isika raha te-handrakotra ireo toerana mahaliana izay tsy maintsy ho hita eny na eny. Mety manana predilection manokana ho an'ny zavatra iray ianao, fa ny tena marina dia misy zavatra be dia be hita ao an-tanàna izay tsy azontsika herinandro.
Mamintina betsaka ny toerana jerena ary manantena fa tsy misy andalana lava handaniantsika fotoana, misy toerana vitsivitsy izay tsy maintsy apetraka ao amin'ny lisitray. Ny ankamaroan'ny zavatra dia ao amin'ny tanàna taloha sy akaiky, izay bonus, mba hahafahanao mandany ny roa andro voalohany ao afovoan'i Roma. Ny farany dia tsy maintsy mandeha any Vatican, izay misy be dia be koa ny mahita.
1 Andro voalohany, ny tena ilaina
2 Andro faharoa, mbola ao Roma isika
3 Andro fahatelo, ny Vatican
Andro voalohany, ny tena ilaina
Tsy te halahelo amin'ny antsipiriany rehetra ao an-tanànan'i Roma ianao, fa ny marina dia misy ny tena ilaina. Ny Colosseum, tandindon'i Roma, dia mety ho fijanonana voalohany. Saika misy tsipika ny tapakila, na dia azo alamina aza ny fitsangatsanganana hahita ny Colosseum amin'ny antsipiriany, na dia lafo kokoa aza ireo. Akaiky ny Colosseum dia misy fitsidihana mahaliana maromaro. Amin'ny lafiny iray, misy ny Palatine, ilay havoana izay heverina ho fanaka ao an-tanàna. Eto amin'ity havoana ity dia misy toerana maromaro ahitanao, toa ny House of Livia, ny House of Augustus miaraka amina frescoes taloha, ny Domus Flavia, ny Farnese Gardens, izay zaridaina fambolena voalohany any Eropa, ary ny Museum Palatine. Manaraka ny làlana akaikin'ny Colosseum dia afaka mandeha any amin'ny Arch of Constantine koa isika ary avy eo mankany amin'ny Forum Romanina, toerana misy ny fiainam-bahoaka taloha ao an-tanàna ary misy sisa tavela ankehitriny ahafahantsika maka sary an-tsaina ny fomba mahavariana ity faritra manan-danja ity.
Kely lavitra ny Pantheon an'i Agrippa, fa iray hafa amin'ny tena ilaina. Ity trano ity no notehirizina tsara indrindra tany Roma fahiny, trano boribory izay tsy dia gaga akory avy ao anatiny. Tsiahivina fa eto no milevina ilay mpanao hosodoko Rafael. Lavitra kely lavitra dia azo atao ny mahita ny Piazza Navona, amin'ireo kianja manan-danja indrindra ao an-tanàna. Ao no tsy maintsy ahitanao tsirairay ny loharano telo malaza, izay ahitana ny 'Loharanon'ny renirano efatra' nataon'i Bernini. Izy io koa dia manana ny Loharanon'ny Moor sy ny Loharanon'i Neptune, samy avy amin'i Giacomo della Porta. Tsy afaka miala amin'ny andro voalohany isika raha tsy mankany amin'ny Trevi Fountain, elanelana kely amin'ny Piazza Navona, any Piazza di Trevi. Loharano mahafinaritra izy io, saingy tsy maintsy tsidihinay koa io noho io angano io izay milaza fa raha manipy vola madinika ianao ao amin'ilay loharano dia hiverina any Roma ianao.
Andro faharoa, mbola ao Roma isika
Amin'ny andro faharoa dia afaka manohy mahafantatra bebe kokoa momba an'i Roma isika. ny catacombs dia miha malaza hatrany ary misy fitsidihana maromaro hitsidihana. Ireo an'ny San Sebastián, San Calixto na Domitila ankoatry ny hafa. Ny toerana nandevenana ny mpanompo sampy sy ny Kristiana voalohany ankehitriny dia nanjary traikefa tokana hahitana an'i Roma ambanin'ny tany. Raha tia toerana maintso isika dia tsy maintsy mahita Villa Borghese, iray amin'ireo valan-javaboary tsara indrindra sy lehibe indrindra eran'i Eropa. Ao amin'ny tanàna dia tsy maintsy mamakivaky ny malaza koa isika Vavan'ny Fahamarinana, izay ilazan'izy ireo fa raha mametraka ny tananao sy mandainga ianao dia hahatratra anao. Ny teboka mahaliana hafa dia ny Tsenan'i Trajan, noheverina ho ivontoerana fiantsenana anaty trano voalohany eto an-tany, sy ny Fandroana an'i Caracalla, ivon-toerana mafana ao an-tanàna.
Andro fahatelo, ny Vatican
El Vatican no firenena kely indrindra any Eropa ary satria tsy eo akaikin'ny ivon-toerana manan-tantara io dia tsara kokoa ny mamela ny dia mandritra ny andro iray manokana. Ao amin'ity fanjakana-tanàna ity dia ahitantsika ny Kianja malaza St. Peter, naorin'i Bernini, toerana misy ny Basilica St. Peter. Azonao jerena avy ao anatiny ity basilica ity, izay misy ny sarin'i La Pieta an'ny Michelangelo. Ny fiakarana any amin'ny dome dia afaka mankafy fomba fijery mahavariana amin'ny kianja ianao.
Mitohy ny fitsidihana ny Tranombakoka VaticanNa dia voafetra aza ny fotoanantsika dia tsara kokoa ny mitady izay tiana ho hita fotsiny ary mamela ny ambiny ho amin'ny fitsidihana lava hafa, satria afaka andro maromaro vao hahita azy ireo amin'ny fomba feno. Betsaka ny zavatra hita ary mahasarika olona izy ireo. Avy amin'ny galerin'ny sarintany sarintany ka hatrany amin'ny Gallery of Candelabra, the Pavilion of the Floats, the Gallery of Tapestries, the Pinacoteca, the Egypt Museum or the Etruscan Museum and others. Raha fintinina dia tsy azo atao ny mahita azy rehetra, ka tsy maintsy misafidy isika.
Tsy afaka miala any Roma isika raha tsy mitsidika ny Sistine Chapel miaraka amin'ny asa lehibe nataon'i Michelangelo eo amin'ny valindrihana trano fiangonana. Ny fresco miaraka amin'ny Fitsarana Farany sy ny Famoronana an'i Adama dia tsy maintsy jerena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Inona no hitantsika any Roma ao anatin'ny 3 andro
Kolontsaina Japoney, mahaliana toy ny mampiavaka azy